Guzosie Ike n’Ezi Ofufe - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
9 Ọ bụ mgbe ọtụtụ narị afọ gasịrị kemgbe Jizọs bisịrị n’ụwa ka ndị mmadụ malitere ime ememe ncheta ọmụmụ ya na December 25. Ma ọ bụghị n’ụbọchị ahụ ka a mụrụ Jizọs, n’ihi na ihe àmà na-egosi na a mụrụ ya n’October.* Gịnịzi mere e ji họrọ December 25? O yiri ka ụfọdụ ndị mesịrị zọrọ na ha bụ Ndị Kraịst hà bịara “chọọ ka ụbọchị ahụ dabaa n’ụbọchị ememe ndị Rom na-ekpere arụsị ji echeta ‘ụbọchị ọmụmụ nke anyanwụ a na-emerighị emeri.’ ” ( The New Encyclopædia Britannica ) N’oge oyi, bụ́ mgbe o yiri ka anyanwụ adịghị nnọọ achasi ike, ndị ọgọ mmụọ na-eme ememe iji mee ka ihe a nke na-enye okpomọkụ, nke na-enyekwa ìhè si n’ebe dị anya ọ gara lọta. E chere na ọ bụ na December 25 ka anyanwụ ahụ lọtawara. Iji nwaa ịtọghata ndị ọgọ mmụọ, ndị ndú okpukpe nabatara ememe a ma gbalịa ime ka o yie “nke Ndị Kraịst.”#
10 Ọ dịwo anya a chọpụtara na Krismas sitere n’ememe ndị ọgọ mmụọ. Ebe ọ bụ na o sitere n’ememe Akwụkwọ Nsọ na-akwadoghị, a machibidoro Krismas iwu n’England nakwa n’ụfọdụ mba ndị ọzọ America chịrị na narị afọ nke 17. Ọbụna a na-eri onye ọ bụla ghara ọrụ n’ụbọchị Krismas nhá. Otú ọ dị, n’oge na-adịghị anya, omenala ochie ndị ahụ lọghachiri, a gbakwụnyekwara ụfọdụ ndị ọhụrụ. Krismas ghọghachiri nnukwu ememe, ọ ka dịkwa otú ahụ n’ọtụtụ ala. Ma ebe ọ bụ na ọ dị ihe jikọrọ Krismas na okpukpe ụgha, ndị chọrọ ime ihe na-amasị Chineke adịghị agba Krismas ma ọ bụ ememe ọ bụla ọzọ nke malitere n’ikpere arụsị.%
* Lee Ihe Odide Ntụkwasị.
# Ememe Saturnalia sokwa n’ihe ndị mere e ji họrọ December 25. A na-eme ememe a nke a na-emere chi ọrụ ubi nke ndị Rom na December 17-24. A na-enwe oriri na nkwari, na-enyerịtakwa onyinye n’oge ememe Saturnalia.
% Iji nweta nkọwa banyere otú Ndị Kraịst na-esi ele ememe ndị na-ewu ewu anya, lee Ihe Odide Ntụkwasị.